Banaanbax lagu taageerayo xukuumada R/W Cabdi Faarax Shirdoon oo ka dhacay Muqdisho
Muqdisho:-Banaan bax ay soo abaabuleed madaxda 16-ka degmo ee Gobolka Banaadir ayaa maanta waxaa uu ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana banaanbaxa lagu taageerayey xukuumada uu dhawaan soo dhisay Raisulwasaaraha DFS Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid).
Banaanbaxa ayaa waxaa ka soo qeyb galay arday Iskuulada iyo dadweyne kale waxaana uu banaanbaxa ka dhacay Garoonka kubada cagta ee stadiyo koonis .
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) oo ka hadlay banaan baxa ayaa ugu baaqay Xildhibaanada Baarlamaanka DFS in ay codka kalsoonida ay siiyaan Golaha wasiirada ee uu dhawaan soo dhisay Raisulwasaare Saacid.
Banaanbaxa ayaa waxaa sidoo kale ka soo qeyb galay Raisulwasaaraha DFS Cabdi Faarax Shirdoon wuxuuna baaq u jeediyey xildhibaanada DFS wuxuuna ka codsaday in codka kalsoonida ay siiyaan xukuumadiisa wuxuuna u rajeeyey shacabka Soomaaliyeed in sanadka kan xiga ay helaan nabad waarta.
Ra’iisul wasaaraha DFS ayaa waxaa sidoo kale banaanbaxa lagu taageerayo kala soo qeyb galay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada waxaana ka mid ahaa Wasiirada Arrimaha gudaha iyo Wasiirka Gaashaandhiga ,Wasiirka Maaliyada iyo saraakiil ka tirsan xafiiska Raisulwasaare Saacid.
Ciidamada AMISOM iyo kuwa DFS ayaa si weyn u adkeeyey amaanka Garoonka kubada Cagta ee Stadiyo Konis oo uu maanta ka dhacayey Banaanbaxa lagu taageerayo Xukuumada Raisulwasaare Saacid.